30 Dariiqo oo Lagu Dhiiri Galiyo Bloggaaga
Talaado, Oktoobar 23, 2012 Talaado, Oktoobar 23, 2012 Douglas Karr
Waxaan had iyo jeer u sheegnaa macaamiisheenna inaysan ku filneyn kaliya in la qoro qoraalo qoraallo ah. Mar alla markii qoraalkaaga la qoro, waxaad u baahan tahay inaad ogeysiiso dhagaystayaasha bartilmaameedka ah inay halkaa ku sugan tahay accomp tan waxaa lagu dhammaystiri karaa iyadoo lagu soo bandhigayo hordhac barta Twitter-ka, Facebook-ga, isku xirka boggag dheeri ah, dirista ogeysiisyada emaylkaaga, iyo u gudbinta baraha bulshada. goobaha meel kasta. Dadka intiisa badani kuma soo noqdaan goob maalinba maalinta ka dambaysa in yar ayaa iska qori doonta quudintaada. Aad iyo aad iyo aad u badan, dadku waxay ku tiirsan yihiin hufnaanta shabakadooda bulsheed. Marka… haddii aad jeceshahay in la helo waxyaabaha aad ka kooban tahay, waxa aad u baahan tahay in laga wada hadlo shabakadahaas dhexdooda!
Halkan waxaa ah 30 dariiqo oo lagu kobciyo qoraaladaada blog-ka isla markaana looga kaxeeyo taraafig badan bartaada Bilow Farxad.
Tags: kor u qaadista bartahubkaadhiirrigelinta waxyaabahablogging shirkadaha
Mustaqbalka Bulshada Waa Mustaqbalka Suuqgeynta
Noola mid ah! Daraasad ku Saabsan Isticmaalayaasha Noocooda
Oktoobar 23, 2012 at 12:25 PM
Aad baad ugu mahadsantahay wadaagida tan!
Oktoobar 23, 2012 at 4:09 PM
Faahfaahin weyn, @andreealaunchgrowjoycom: disqus! Dhiirrigelintu waxay fure u tahay istiraatiijiyad kasta oo content ah.
Tilmaamaha Guru ee Frugal
Apr 28, 2013 at 1: 03 PM
Qaar ka mid ah kuwan ayaa ka soo horjeeda TOS ee baraha bulshada, qaar kalena waxay kugu ciqaabi doonaan Google.
Apr 29, 2013 at 3: 58 AM
Isticmaalka golayaasha waa hab fiican oo wax lagu barto, wax loo wadaago, loona horumariyo isla waqtigaas! Kaliya xusuusnow inaad ku daabacdo waxyaabahaaga ugufiican bartaada kahor kahor meel kale.
14, 2015 at 5: 41 AM
Calaamadeynta ayaa door weyn ka ciyaareysa guusha barta. Warbaahinta bulshada wax badan ayey ka caawisaa kala-sumaynta.
Jan 18, 2016 saacadu markay ahayd 1:32 PM
Waad ku mahadsan tahay sida infographic faahfaahsan. Warbaahinta bulshada, waa dhiirrigeliye cayiman!
Apr 11, 2016 at 4: 55 AM
Runtii qoraal weyn oo ku saabsan dhiirrigelinta barta.
Si loo socodsiiyo baloog si sax ah, Waa inaan helnaa aqristayaal joogto ah iyo inaan helno akhristayaal joogto ah, Waa inaan kor u qaadno buugaagteena si joogto ah.
Kor u qaadista barta ayaa aad muhiim u ah maalmahan. Waa inaan awood u yeelanaa inaan soo jiidanno indhaha akhristayaasha.
Runtii waan jeclahay habka baloogyada blog-ka ee aad halkan ku sharraxday aniguna waan kugu raacsanahay Adoo raacaya farsamooyinkan, Waxaan ku wadi karnaa akhristayaasha joogtada ah bartayada.
Sidaan u maleynayo, si loo helo akhristayaal daacad ah oo joogto ah, Waa inaan qormooyin tayo sare leh oo soo jiidasho leh qornaa maxaa yeelay waxyaabaha ku jira ayaa ah waxa kaliya ee soo jiidan kara akhristayaasha ilaha kala duwan ee kala duwan hadey tahay baraha bulshada ama emaylka la gaarsiiyo. Mawduucu waa inuu lahaadaa awood uu ku soo jiito akhristayaasha.
Meelahaas oo ay weheliyaan, kooxaha Facebook sidoo kale waxay leeyihiin awood weyn. Waxaan kaxeyn karnaa taraafikada iyo akhristayaasha kooxahan hadaan qoreyno waxyaabaha laga cabsado.
Waan ku faraxsanahay inaad qortay maqaal aad u wanaagsan. Waad ku mahadsantahay wadaagista waa nala joogtaa. 😀